तीन बाबुछोरा तेक्वान्दोमा, अन्तर्राष्ट्रिय... :: विजय नेपाल :: Setopati
विजय नेपाल सिन्धुपाल्चोक, जेठ १९
सिन्धुपाल्चोकमा २०५४ सालमा तेक्वान्दो भित्र्याएका प्रेम भण्डारी जिल्ला तथा मुलुकमै अब्बल तेक्वान्दो खेलाडीका रूपमा चिनिन्छन्। तेक्वान्दोको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका प्रेमले स्वर्ण सहित दर्जनौं पदक समेत जितिसकेका छन्।
तेक्वान्दोको राष्ट्रिय खेलाडी हुँदै प्रशिक्षक र कोचको भूमिकामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा समेत सहभागिता जनाइसकेका प्रेम आफ्ना छोराहरुलाई समेत यसै क्षेत्रमा सँगै लिएर हिँडिरहेका छन्।
उनका जेठा छोरा सगुन १५ वर्षको उमेरमै गत मंसिरमा ‘तेक्वान्दो ब्ल्याक बेल्ट टु डान’ भैसकेका छन्। काठमाडौंको लाइसिएम बोर्डिङ स्कुलबाट यसै वर्ष माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) दिएका सगुन बाबुको अनुपस्थितिमा सोही स्कुलमा प्रशिक्षकको रुपमा बिँडो थामिरहेका छन्।
काठमाडौं तथा सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न जिल्लास्तरीय प्रतियोगितामा सहभागी भई उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर सबैको ताली बटुलिरहेका छन् सगुन। बाबु प्रेमसँगै सगुन पनि भुटानमा यही जेठ १८ बाट जारी पाँचौ अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगितामा सहभागी हुन बुधबार नै थिम्पु पुगेका छन्।
बाबुछोरा नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको एकै स्पर्धामा उत्रेको यो नेपाललकै लागि पहिलो रेकर्ड हुन सक्ने बाबु प्रेमको भनाई छ। उक्त प्रतियोगितामा बाबु ७५ किलो तौल समूहमा भिड्दै छन् भने सगुन ५० किलो तौल समूहमा आप्mनो कौशल प्रदर्शन गर्दैछन्।
सगुन अहिले पनि नियमित रुपमा आफू पढ्दै गरेको लाइसिएम बोर्डिङ स्कुलमा प्रशिक्षण समेत दिइरहेका छन्। त्यससँगै होलिक्रस इङ्लिस स्कुल र गोठाटार तेक्वान्दो डोजाङ्मा समेत प्रशिक्षकको रुपमा तेक्वान्दो खेलाइरहेका छन्। बाबु र दाई भुटानमा रहँदा भने कान्छा छोरा प्रशान्तले लाइसिएम बोर्डिङ स्कुलमा तेक्वान्दो सिकीरहेका आफूभन्दा जुनियर प्रशिक्षार्थीलाई प्रशिक्षण दिनेछन्।
बाबु र दाजुको अनुपस्थितिले हुनसक्ने प्रशिक्षक अभावलाई प्रशान्तले पूर्ति गर्नेछन्। कान्छा प्रशान्त समेत गत जेठबाट तेक्वान्दाको ब्याल्क बेल्ड (वान डान) होल्डर हुन्। लाइसिएम बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा ६ मा अध्ययन गरिरहेका प्रशान्त ७ वर्षको उमेरबाट तेक्वान्दो खेलमा छन्। अहिले ११ वर्ष उमेर पार गर्दै गरेका प्रशान्त, सगुन सहित आफु पनि एकै स्पर्धामा उत्रने बाबु प्रेमको लक्ष्य छ।
दुवै छोराहरु पढाइसँगै खेलकुदलाई पनि सँगसँगै लैजाने सोचमा छन्। यसपालि एसइई दिएका सगुुन कम्तीमा ए ग्रेड आउने अपेक्षामा छन्।खेलकुदसँगै पढाईमा समेत अब्बल रहेका सगुन एसइईपछि म्यानेजमेन्ट पढ्ने सोचमा छन्। आफ्नो पढाईसँगै खेलकुदलाई समेत अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएका छन् सगुन। छोरा बु भैसकेकोले उसको चाहनाअनुसार विषय पढाउने बाबु बताउँछन्।
कान्छा छोरा प्रशान्तको लक्ष्य पनि दाजुुसँग मिल्दोजुल्दो छ। प्रशान्त पढाई र तेक्वान्दो दुवै छाड्न नसक्ने अवस्थामा छन्। पढाई र खेलकुद दुवै भएमा मात्र भविष्यमा केही गर्न सकिने सोचमा छन् प्रशान्त।
तीनै बाउछोरा गोठाटार तेक्वान्दो डोजाङमा आवद्ध भई खेलको विकासमा अनवरत लागिरहेका छन्। विभिन्न जिल्लास्तरीय प्रतियोगितामा उनीहरु सहभागी हुने गरेका छन्।
हाल जिल्ला तेक्वान्दो संघ, सिन्धुपाल्चोकको अध्यक्ष पद सम्हालिरहेका प्रेमले वि.सं. २०५९, ६४ र ७० मा क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौ ‘डान’ समेत लिइसकेका छन्। उनी छैटौं डान लिने तयारीमा छन्। अबको पाँच/छ महिनामा नै आफुले छैटौं डान लिइसक्ने उनको दावी छ।
विशेषगरी ५० को दशकमा प्रतियोगीको रुपमा कलर द ग्रेड च्याम्पियनसीप, राष्ट्रिय खेलकुद, भ्याली च्याम्पियनसीप जस्ता खेल प्रतियोगतिाहरुमा सहभागी भई उत्कृष्ट ठहरिएका प्रेम त्यसपछिको दशकमा भने राष्ट्रियस्तरका खेलहरुमा प्रशिक्षक तथा रेफ्रीको रुपमा मात्रै सहभागी भइरहेका छन्।
सन् २०१५ मा कोरियामा भएको प्रशिक्षक तालिममा उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीको रुपमा सम्मानित भएका उनी २०१६ मा भुटानमा उत्कृष्ट कोचको रुपमा सम्मानित भएका थिए। सन् २०१७ मा दक्षिण कोरियामा भएको एघारौं विश्व तेक्वान्दो कल्चर एक्स्पो प्रतियोगितामा उनले १ सय १३ देशका प्रतिस्पर्धीसँग खेल्दै फाईट र पुम्से दुबै स्पर्धामा रजत पदक हत्याउन सफल भए।
उनको खेल जीवनमै ठूलो सफलता भने २०१८ मा दक्षिण कोरियामा सम्पन्न १२ औं विश्व तेक्वान्दो कल्चर एक्स्पो र विश्व तेक्वान्दो हामादाङ प्रतियोगिता हो। सो प्रतियोगितामा भण्डारीले ८० केजी तौल समूहमा गेरोगी (फाइट)तर्फ स्वर्ण पदक हात पारेका थिए। पुम्से तर्फ उनले रजत पदक हात पारेका थिए।
यो सफलता जीवनको महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको उनी बताउँछन्। ‘मेहनतअनुसारको फल प्राप्ति भएको छ,’ दक्षिण कोरियामा रहेका भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा कुरा गर्दै भने, ‘म निकै खुशी छु, देशका लागि खेलेको थिएँ, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेँ।’
त्यस्तै जापानको ओसोका साकाई सिटीमा भएको १७ औं वाटाकप अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगितामा प्रेमले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। यद्यपी पुरस्कार हात पार्न सकेनन्।
उनी आफु र आफ्नोको मात्रै हैन, आफ्ना चेलाहरुको सफलताका पनि उत्प्रेरक हुन्। उनले हालसम्म १ हजार ८ सय भन्दा बढीलाई तेक्वान्दो प्रशिक्षण दिइसकेका छन्। उनैले तेक्वान्दोमा प्रबेश गराएकाहरुमध्ये ६० भन्दा बढीले ‘ब्ल्याक बेल्ड’ लिइसकेका छन्। केहीले त पाँचौ डान समेत प्राप्त गरिसकेका छन्।
नेपालकै उत्कृष्ट तेक्वान्दो खेल प्रतियोगिता मध्येमा पर्ने सिन्धु आमन्त्रण राष्ट्रिय प्रतियोगिता वि.सं. २०६८, २०७० र २०७२ मा गरी ३ वटा प्रतियोगिता प्रेमले सफलतापुर्वक सम्पन्न गराइसकेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एक पटक जोर्डनमा मात्रै सम्पन्न भएको विश्व तेक्वान्दो महासंघको विश्व स्तरीय तेक्वान्दो डेमोस्ट्रेशन कार्यक्रम समेत उनकै नेतृत्वमा सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघुमा आयोजना भएको थियो।
प्रकाशित मिति: आईतबार, जेठ १९, २०७६, १४:२७:००